INingizimu Afrika isengunogwaja ozikhundlakhundla - Bayede News
Yize elakuleli lisengumngani wawo wonke amazwe, izigameko zakamuva zingase ziphoqe ukuba likhethe abalingani abasha
BAMBALWA abangangabaza ubumqoka beNingizimu Afrika kupolitiki yamazwe ngamazwe. Umlando waleli lizwe kanye nabaholi balo wenza libe yinoni kwamanye amazwe. Nokho njengawo wonke amazwe leli lizwe kumele lihambe ngokucophelela nxa likhetha abalingani noma labo abangathathwa njengezitha ngoba iphutha lingaba nomthelela oyingozi. Yize kusade kukhulunyelwa phansi okusobala wukuthi emhlabeni jikelele kukhona ukubhekana ngeziqu zamehlo. Umahluko walokhu okwenzekayo kanye nezimpi ezimbili zomhlaba ezedlulayo wukuthi lokhu okwenzeka manje kungadla noma kuqhubeka ezigabeni ezehlukene. Ezimpini ezedlule ibidumelana ngezibhamu nombayimbayi kulale uyaca. Kwasuka lapho kwaba yimpi yokunyundelana (propaganda war) eyayenziwa ngamazwe ayesempini, okwakuyiMelika ngakolunye uhlangothi bese kuba yiSoviet Union ngakolunye uhlangothi. Ngalezo zikhathi amazwe ase-Afrika athinteka ngoba izinkunzi lezi ezimbili zazinabalingani kuwo. Ababeseka amaMelika babethola usizo ezinhlakeni ezifana neCentral Intelligent Agency (CIA) kuthi ababeseka iSoviet Union bona bathole uqeqesho lwezempi kokunye nezikhali. Ngalesi sikhathi okwakugqamile wukuthi ohulumeni bengcindezelo njengowaseNingizimu Afrika babesekwa ngamaMelikana namazwe aseNtshonalanga kuthi izinhlangano ezilwela inkululeko zona ziqome ngasohlangothi lweSoviet Union.
Ngonyaka wezi-2015 kubukeka sekuqala phansi ukuhleleka kwepolitiki yamazwe ngamazwe nokuphoqa ukuthi amazwe akhethe abalingani. Lokhu kumele kwenzeke ngokucophelela ngoba iphutha nje elincane lingenza umonakalo omkhulu. Lokhu kwenzeka kwezinto kuphoqa amazwe afana neNingizimu Afrika ukuba akhethe abalingani. Yize elakuleli liyilungu lamazwe abizwa ngokuthi yiNon-Aligned Movement (NAM), okungamazwe angachemile ngokusemthethweni namazwe ayizikhondlakhondla. Leli qoqo lamazwe elenziwe ngamazwe ali-115 labunjwa emuva komhlangano owawaziwa nge-Asia-Africa Confrence owawusezweni lase-Indonesia eBandung ngonyaka we-1955.
Kanti futhi leli lizwe liphinde libe yilungu leqoqo lamazwe aziwa ngeCommonwealth lona elenziwe ngamazwe angama-53 nanabantu abazigidigidi ezi-2,2. Lawa ngamazwe ayengamakoloni ezwe iBrithani. Lezi zinhlaka zombili zazimqoka ekutheni elakuleli lamukeleke emazweni omhlaba ngesikhathi lithola inkululeko ngonyaka we-1994 Ngaleso sikhathi ubuso bezwe kwakunguMengameli uNelson Mandela . Kwathi nxa uMengameli uThabo Mbeki esethatha izintambo inqubomgomo yakuleli yamazwe ngamazwe yagxila kakhulu ezwenikazi lase-Afrika nayilapho leli lizwe laliphezu kwemizamo yokwakha ubunye emazweni ase-Afrika. Yize kukhona izinqginamba. Bukhulu ubufakazi obukhona obukhomba ukuthi imizamo kaMzizi yaphumelela ngoba ngesakhe isikhathi izwekazi i-Afrika lalihlasela izigqinamba zezomnotho, ezempi kanye nepolitiki yamazwe ngamazwe njengembumba.
Kuthe uma sekuthatha uMengameli uZuma kwakhona izinto ezigqamayo ngoba yize engagudlukanga enqubeni eyaqalwa ngoMengameli bangaphambilini, kubuke uMsholozi ekhethe amazwe athile ukusebenzisana nawo ukuze kukhule umnotho wezwe. Kepha lokhu ubukeka ekwenze ngobuchule ngoba yize eseqome isidana iqoqo lamazwe azibiza ngeBRICS okungamazwe ahlanganisa iBrazil, iRussia, i-India iChina neNingizimu Afrika kawashiyanga ngemuva amazwe ase-Afrika. Lokhu kubonakale ngesikhathi kunomhlangano weBRICS eThekwinini ngowezi-2013 iNingizimu Afrika yaqinisekisa ukuthi yize engewona amalungu kepha amazwe ase-Afrika kanye ne-African Union bayaba yingxenye yomhlangano. Khona lapho elakuleli liyingxenye yohlaka lweqoqo lamazwe aziwa ngeG20 ehlanganise i-Argentina, i-Australia, iBrazil, iCanada, iChina, iFrance, iGermany, i-India, i-Indonesia, i-Italy, iJapan, iRepublic of Korea, iMexico, iRussia, iSaudi Arabia, iTurkey, i-United Kingdom, i-United States, i-European Union neNingizimu Afrika.
Konke lokhu kuveza isithombe sokuthi iNingizimu Afrika ihlose ukunyathela ngokucophelela kupolitiki yamazwe ngamazwe ukuze ingazitholi isinukwa ngokuchema. Kuningi okwenzekayo okuphazamisa lesi sinqumo sokungachemi. Isibonelo nje udaba lwe ISIS nolwaseSyria uma lungaphathwa kobunono lubukeka lungase lwehlukanise amazwe phakathi nokungenza elakuleli liphoqeleke ukuba likhethe abalingani. Zikhona nezinye zase-Afrika okungathi uma impela singatholakali isixazululo bese elakuleli liba nengcindezi. Lezi zimo zihlanganisa ezomnotho, ezokuphepha nepolitiki yamazwe ngamazwe lapho amazwe ase-Afrika egqamula amaketanga engasafuni ukudonswa ngekhala ngamazwe aseNtshonalanga. Ubushokobezi obuqhutshwa yi-ISS buhlose khona ukwehlukanisa amazwe phakathi. Umbuzo wukuthi ngabe elakuleli liyogcina lenze njani, nalo lizothumela amagumgedlela ukuba ayolwa ne-ISS noma lizobhaca ngokuthi alichemile? Liyothini uma i-ISS isigadla eGoli?
Bayede News Apr 12, 2016